တရုတ်ထုံးစံသဘာဝဖိုင်ဘာ Eco-Friendly Cannabis sativa 100% လျှော်ပန်းထိုးအားကစားအဖုံးဘေ့စ်ဘောစက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ | ရက်ကန်း
ထုံးစံသဘာဝဖိုင်ဘာ Eco-Friendly ဆေးခြောက် sativa 100% Hemp ပန်းအားကစား Caps ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်
အားကစား ဦး ထုပ် အမျိုးအစား:
6- Panel ကို ဦး ထုပ်
ဘေ့စ်ဘော ဦး ခေါင်း၏အမှတ်တံဆိပ်:
ဘေ့စ်ဘော Cap Backclosure:
suede ဦး ထုပ်၏ပို့ဆောင်မှု:
စွပ် ဦး ထုပ်၏ငွေပေးချေမှု:
T / T, L / C၊ ဘဏ်စသည်
အနက်ရောင်၊ မှောင်မိုက်၊ အညို၊ အပြာ၊ အဖြူ
50 pcs / polybag, 100 pcs / ctn (85 * 37 * 25cm), ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ထုပ်ပိုးမှုလိုအပ်ချက်အရ။
စိတ်ကြိုက် Hemp ဘေ့စ်ဘော Caps
သင် 100% လျှော်ထုပ်သို့မဟုတ်လျှော် blending ဦး ထုပ်စိတ်ကြိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်
သင်သည်သင်၏ ဦး ထုပ်ပေါ်တွင်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်: 100% လျှော်ထည်, လျှော်ဝါဂွမ်းရောစပ်ထည်, လျှော်ပိတ်ချောရောနှောထည်, လျှော်ချည်ထည်
နောက်ပြီးလွင်ပြင်ပုံစံ၊ အမြွှာပုံစံ၊ ပတ္တူပုံစံ၊
၁၀၀% လျှော်ထည်သည်အရောင်ဆိုးများကိုမရရှိနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်သည် ၁၀၀% လျှော်သာရွေးလျှင်အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်၊ အပြာရင့်၊ အညိုရောင်၊ သငျသညျအလင်းအရောင်လျှော် ဦး ထုပ်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ငါတို့လျှော်ရောစပ်ထည်၏လုပ်နိုင်ပါတယ်
ကျနော်တို့လျှော်ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်, snapback ဦး ထုပ်, trucker ဦး ထုပ်နှင့်လျှော်ချည်ထည် ဦး ထုပ်စေနိုင်သည်
6. ချည်ကြိုး / နံရံ
Polyester / ဝါဂွမ်း
50 pcs / poly / polybag, 200 pcs / carton 60cm * 45cm * 38cm
လေကြောင်း၊ ပင်လယ်၊ သို့မဟုတ် FedEx၊ DHL၊ UPS သို့မဟုတ် TNT စသည့်လေကြောင်းဖြင့်
Tianjin, Shanghai, သို့မဟုတ်အခြားလိုအပ်သောဆိပ်ကမ်း
L / C၊ T / T၊ Western Union၊ ငွေဂရမ်၊ paypal၊ လုံခြုံသောငွေပေးချေမှု
၁။ ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးမှာဝါဂွမ်း၊ polyester, acrylic, suede, kanvas, corduroy, woolen, နိုင်လွန်၊
2. အမှတ်တံဆိပ်အတွက်, ငါတို့ပန်း, ပုံနှိပ်, သားရေ patch ကို, သတ္တုလိုဂို, applique, သင်သင်လိုအပ်သကဲ့သို့ငါတို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
3.We OEM နှင့် ODM ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုဂိုများကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သငျသညျလျှော်ထုတ်လုပ်မှုထုံးစံသို့မဟုတ်ဝယ်ယူသောအခါ, သင်ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းများကို3မေးနိုင်သလဲ
Q1: ၎င်းသည်သဘာ ၀ ပုဆည်ဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သလား။
အဆိုပါလျှော်ပြာမှလောင်ကျွမ်းခြင်း, polyester ဘောလုံးကိုမှလောင်ကျွမ်း။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပိတ်ချောနဲ့ ramie နှင့်အတူလျှော်မှားယွင်းလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤပိတ်ထည်များ (သို့) အမျှင်များ (လျှော်၊ ဆေးခြောက်၊ ပိတ်ချော၊ ပိုက်ဆန်၊ ဂျုံ၊ ဂျူး၊
အင်္ဂလိပ်လို （ma equal နဲ့တူတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးမဟုတ်ဘူး။
တခါတရံ （ma English ကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လျှော်ပေးသောဘာသာသို့ပြန်ဆိုသော်လည်း hem ma hem သည်လျှော်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လျှော်၊ ပိတ်ချော၊ ဒီတော့
သူတို့ကိုမှားဖို့ esay ပါတယ်။
ကျနော်တို့မျက်စိဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာလျှော်နှင့် flax မပြောနိုင်ပါ
Q3: ၁၀၀% လျှော်ကြေးလား။ အဆိုပါလျှော်ထည်၏အစိတ်အပိုင်းကဘာလဲ
Hemp ဖိုင်ဘာကို ၁၀၀% လျှော်ချည်မျှင်နှင့်လျှော်ရောစပ်ထားသောချည်၊ ချည်၊ ပိတ်ချော၊
100% လျှော်ထည်သို့မဟုတ်လျှော် Blend ထည်ရယူပါ။
100% လျှော်ဆိုးဆေးဆိုးရန်ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်အနက်ရောင်၊ အနက်ရောင်မီးခိုးရောင်၊ အပြာရင့်၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အရောင်ချွတ်ဆေးကဲ့သို့သောမှောင်မိုက်သောအရောင်အနည်းငယ်ကိုသာဆေးကြောနိုင်သည်။
ဒီတော့အလင်းရောင်လျှော်ထည်ဟာ ၁၀၀% လျှော်မဖွစ်နိုင်ပါ။
Weaver Textiles Co. , Ltd. သည်ချည်မျှင်နှင့်အထည်ထုတ်ကုန်များပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်း၌အနှစ် 20 ကျော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါပြီ။ ၀ န်ထမ်းအားလုံး၏မဆုပ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်စဉ်ရောင်းအားသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ သန်းထိရှိပြီးအမြန်နှုန်းဖြင့်တိုးတက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ထမ်းများရှိသောအထည်အလိပ်စက်ရုံနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောသမဝါယမနည်းလမ်းများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ကိုရီးယား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ဟောင်ကောင်၊ ဂျပန်၊ တူရကီ၊ စော်ဘွားများ၊ သက်ဆိုင်ရာအထည်အလိပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှကြီးစွာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှ စတင်၍ Hebei ပြည်နယ်တွင်အခြေစိုက်သည်။ Oceania (25.00%)၊ မြောက်အမေရိက (25.00%)၊ အနောက်ဥရောပ (15.00%), ဥရောပမြောက်ပိုင်း (13.00%), အာဖရိက (6.00%), ပြည်တွင်းစျေးကွက်သို့ရောင်းချသည်။ ၅.၀၀%၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း (၅.၀၀%)၊ တောင်အမေရိက (3.00%)၊ ဥရောပတောင်ပိုင်း (2.00%), အရှေ့တောင်အာရှ (1.00%) ။ ကျွန်ုပ်တို့ရုံးတွင်လူ ဦး ရေ ၁၀၁-၂၀၀ ခန့်ရှိသည်။၂။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးကိုမည်သို့အာမခံနိုင်သနည်း။
ဦး ထုပ် & ဦး ထုပ်, ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်, snapback ဦး ထုပ်, ပုံး ဦး ထုပ်, beanies၄။ အခြားသွင်းသူများထံမှမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ထံမှအဘယ်ကြောင့် ၀ ယ်သင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနယ်ပယ်တွင်နှစ်ပေါင်း ၂၀ အထူးပြုစျေးနှုန်းဖြင့် OEM နှင့် ODM ဦး ထုပ်ကိုအထူးပြုပါသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ 1.OEM ထောက်ခံမှု 2. အသေးအော်ဒါကိုလက်ခံသည်။ နမူနာ ၃။ အခမဲ့ ၄။ အမြန်ပေးပို့ခြင်း ၅ ။ ဝန်ဆောင်မှု 6.Trade အာမခံချက်၅ ။
လက်ခံသောပို့ဆောင်ရေးသတ်မှတ်ချက်များ - FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA၊ CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES
လက်ခံသောငွေပေးချေမှုငွေကြေး - USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
လက်ခံသောငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား: T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
ဘာသာစကားများကိုပြောဆိုသည်: အင်္ဂလိပ်, တရုတ်
ကျေးဇူးပြု၍ မင်းမှာကြားမှု >>>
ရှေ့သို့ ပန်းထိုး ဦး ထုပ်အမျိုးသမီးများနွေ ဦး နှင့်နွေရာသီနေရောင်ကာကွယ်မှု ဦး ထုပ်လိပ်ပြာပန်းပွင့်ပန်းဘေ့စ်ဘောထုပ်ဝါဂွမ်းအထွတ်အထိပ်
အားကစား ဦး ထုပ်
စိတ်ကြိုက်အသေးစား MOQ လွင်ပြင်လက်ဆောင်အမြှုပ် Mesh Trucker H ကို ...